China EU- CE Inkonzo kunye noVavanyo |MCM
▍Yintoni iSatifikethi seCE?
Uphawu lwe-CE "yipasipoti" yeemveliso ezingena kwimarike ye-EU kunye nemarike yamazwe ye-EU Free Trade Association.Naziphi na iimveliso ezichaziweyo (ezibandakanyeka kumyalelo wendlela entsha), nokuba zenziwe ngaphandle kwe-EU okanye kumazwe angamalungu e-EU, ukuze zijikeleze ngokukhululekileyo kwimarike ye-EU, kufuneka zihambelane neemfuno zomyalelo kunye nemigangatho efanelekileyo ehambelanayo ngaphambi kokuba ibekwe kwimarike ye-EU, kwaye incamathelise uphawu lweCE.Le yimfuneko enyanzelekileyo yomthetho we-EU kwiimveliso ezinxulumeneyo, obonelela ngomgangatho odibeneyo wobugcisa odibeneyo worhwebo lweemveliso zamazwe ahlukeneyo kwimarike yaseYurophu kwaye wenze lula iinkqubo zorhwebo.
▍Yintoni imiyalelo yeCE?
Lo myalelo luxwebhu lowiso-mthetho olusekwe yi-European Community Council kunye ne-European Commission phantsi kogunyaziso lweiSivumelwano soLuntu lwaseYurophu.Imigaqo esebenzayo yeebhetri yile:
2006/66 / EC & 2013/56 / EU: Umyalelo weBattery.Iibhetri ezithobela lo myalelo kufuneka zibe netoti yenkunkuma;
I-2014/30 / EU: I-Electromagnetic Compatibility Directive (I-EMC Directive).Iibhetri ezithobela lo myalelo kufuneka zibe namanqaku eCE;
2011/65 / EU: Umyalelo we-ROHS.Iibhetri ezithobela lo myalelo kufuneka zibe namanqaku eCE;
Iingcebiso: Kuphela kuxa imveliso ingqinelana nayo yonke imiyalelo ye-CE (amanqaku e-CE kufuneka ancanyatheliswe), apho anokufakwa khona amanqaku xa zonke iimfuno zomyalelo ziphunyeziwe.
▍Imfuneko yokuFaka isicelo seSatifikethi seCE
Nayiphi na imveliso evela kumazwe ahlukeneyo efuna ukungena kwi-EU kunye ne-European Free Trade Zone kufuneka ifake isicelo se-CE-certified kunye ne-CE ephawulwe kwimveliso.Ke ngoko, isatifikethi se-CE yipaspoti yeemveliso ezingena kwi-EU kunye noMmandla woRhwebo oluKhululwa lwaseYurophu.
▍Iinzuzo zokuFaka isicelo sesiqinisekiso seCE
1. Imithetho ye-EU, imimiselo, kunye nemigangatho yokulungelelanisa ayinkulu kuphela ngobuninzi, kodwa iyinkimbinkimbi kumxholo.Ke ngoko, ukufumana isatifikethi seCE lukhetho olulumkileyo lokonga ixesha kunye nomzamo kunye nokunciphisa umngcipheko;
2. Isatifikethi se-CE sinokunceda ekuzuzeni ukuthenjwa ngabathengi kunye neziko lokongamela imarike kangangoko;
3. Inokuthintela ngempumelelo imeko yezityholo zokungaphenduli;
4. Xa sijongene nesimangalo, isiqinisekiso se-CE siya kuba bubungqina obusemthethweni obusemthethweni;
5. Nje ukuba ijeziswe ngamazwe e-EU, iqumrhu loqinisekiso liya kubambisana imingcipheko neshishini, ngaloo ndlela inciphisa umngcipheko weshishini.
● I-MCM ineqela lobugcisa elinabasebenzi abangaphezu kwama-20 ababandakanyekayo kwintsimi yesatifikethi se-CE sebhetri, esibonelela abathengi ngolwazi olukhawulezayo noluchanekileyo kunye nolwazi lwamva nje lwesatifikethi se-CE;
● I-MCM inikezela ngezisombululo ezahlukeneyo ze-CE ezibandakanya i-LVD, i-EMC, izikhokelo zebhetri, njl.
● I-MCM ibonelele ngaphezu kwe-4000 yovavanyo lwebhetri yeCE kwihlabathi jikelele kude kube namhlanje.
Ngaphambili: eMelika- WERCSmart
Okulandelayo: China- CQC
Esi Siqinisekiso seXabiso
Le Nkqubo yeSiqinisekiso
Inkonzo yeSiqinisekiso seCe
Ce Ixesha lokukhokela
Le Amaxwebhu Technical
Ce iMfuneko yobuGcisa
Le Imiba yoVavanyo
Ce Indlela yoVavanyo
Le Ngxelo yoVavanyo
ILebhu yoVavanyo lweCe
Ce Laboratory yoVavanyo
Le Xabiso yoVavanyo
Le Nkonzo yoVavanyo